Enyemaka Ego Site na Mahadum Hodges, Ebumnuche Iji Mee Kọleji
Enyemaka Ego nke Mahadum Hodges, Mmụta, Alliance, na Mmemme Ego
Na Mahadum Hodges, anyị maara na mgbe ụfọdụ ihe ị na-eme ka nwa akwụkwọ nwee ihe ịga nke ọma adabaghị n'ụdị ha ga-achụso agụmakwụkwọ ha. Ọ bụ ya mere anyị ji raara onwe anyị nye inyere ụmụ akwụkwọ aka ịchọta enyemaka ego na ohere agụmakwụkwọ iji nyere ha aka n'okporo ụzọ ha ịga nke ọma. Na mgbakwunye na $ 11 nde na EASE nye onyinye anyị kesara, anyị nwere ọtụtụ agụmakwụkwọ ụlọ ọrụ, mmemme mbelata ọnụego, na atụmatụ ịkwụ ụgwọ.
Pesdị Enyemaka E Nwere:
N'èzí Isi mmalite
Florida zuru ezu
Onye Nyocha Onye Nyocha
Tinye ego na Onwe Gị. Ọ bụ ego kachasị mma ị ga-eme!
Onye Ọrụ Ndị Ọrụ
Inweta akara ugo mmụta mahadum bụ otu n'ime ntinye ego kachasị dị mkpa ị ga - eme, anyị kwenyesiri ike na ị ga - enwe obi ụtọ na itinye ego na Mahadum Hodges.
Office of University of Office of Student Financial Services ewepụtala ndị ọkachamara iji nyere gị aka ịkwụ ụgwọ nhọrọ agụmakwụkwọ dị ka enyemaka ego, akaụntụ ụmụ akwụkwọ, na enyemaka ngwọta akwụkwọ. Ọkachamara enyemaka ego gị nwere ike inye nkwado na ịkwado agụmakwụkwọ gị mgbe akụ na ụba ezinụlọ na ezughi oke.
Tinye ego na ọdịnihu mmụta gị ma mejupụta ngwa FAFSA taa. Mahadum Hodges koodu FAFSA bu 030375.
Mahadum Hodges koodu FAFSA bụ 030375.
Ntuziaka Hodges FAFSA
Tinye maka FAFSA
Nzọụkwụ iji tinye maka Enyemaka Ego
1. Mezue FAFSA
Emecha Free Ngwa maka Federal Student Aid (FAFSA) bụ nzọụkwụ mbụ iji nweta enyemaka gọọmentị etiti maka kọleji. Mecha na idobe FAFSA bụ n'efu na ngwa ngwa, ọ na-enye gị ohere ịnweta isi iyi enyemaka ego iji kwụọ ụgwọ maka kọleji. O nwekwara ike ikpebi iru eru gị maka enyemaka steeti na ụlọ akwụkwọ. Hodges 'FAFSA koodu bụ 030375.
2. Soro onye ndụmọdụ nye ndụmọdụ
Na Mahadum Hodges, ndị ndụmọdụ enyemaka ego nwere ike inyere gị aka ịghọta nhọrọ gị maka ịkwụ ụgwọ maka kọleji ma duzie gị n'usoro itinye akwụkwọ maka ụdị enyemaka ego dị.
3. Nyochaa enyemaka, agụmakwụkwọ, mgbazinye ego, na nhọrọ ịmụ-ọrụ
A na-enye onyinye na agụmakwụkwọ dabere na mkpa na uru na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ego n'efu maka ụmụ akwụkwọ ndị ruru eru ntozu. N'adịghị ka enyem ego, ego mgbazinye ego bụ ego nke ụmụ akwụkwọ na / ma ọ bụ ndị mụrụ ha gbaziri ma ga-akwụghachi-na ọmụrụ nwa. Mmemme ọmụmụ ihe na-enye ụmụ akwụkwọ ohere ịrụ ọrụ nwa oge mgbe ha debanyere aha na Mahadum Hodges.
4. Nweta akwụkwọ edemede gị
Akwụkwọ onyinye gị na-agwa gị usoro mmemme enyemaka ego ị nwere ike ịnata maka agụmakwụkwọ gị na Mahadum Hodges. Akwụkwọ ozi ahụ gụnyere ụdị na enyemaka ego ị nwere ike ịnata site na gọọmentị etiti, steeti, na ụlọ akwụkwọ.
Ofdị Enyemaka Dị Iche
A na-enye onyinye ego na agụmakwụkwọ mahadum dabere na mkpa na uru.
Ndị ọkà mmụta bụ n'efu maka ụmụ akwụkwọ ndị ruru eru ihe ruru eru.
Ego mgbazinye ego ụmụ akwụkwọ bụ ego ụmụ akwụkwọ na / ma ọ bụ nne na nna ha binyere site na ọmụrụ nwa.
Onye Niche Scholarship
Nyocha Degree Specific Specific
Ndị agha / ndị agha na-ahụ maka nkuzi akwụkwọ
Isi Ego Ego
AHASE / FRAG
Mahadum Hodges na-esonye na mmemme EASE (nke a na-akpọbu FRAG). N'ime afọ 5 gara aga, Mahadum Hodges enweela ike inye EASE ihe karịrị ụmụ akwụkwọ 7,500 ihe ruru $ 11M iji nweta ego.
Mahadum Hodges na-esonye na Mmemme Ọdịnihu Ọdịnihu.
Pregwọ Floridagwọ Florida
Mahadum Hodges na-arụ ọrụ na Florida na-akwụ ụgwọ ma na-enye ụmụ akwụkwọ ohere iji ego FPP ha nwere na uche ha.
Emepụtara Florida zuru ezu iji nyere ndị okenye nke ihe karịrị nde mmadụ 2.8 aka ha nwetara otuto na kọleji, mana ha anataghị akara. Akụkụ kachasị mma, ebe ọ bụ na Florida dị ego site na Florida zuru ezu, ọrụ ha na-enye bụ n'efu.
Ọrụ Ndị Ọrụ Na-arụsi Ọrụ Ike - $ 250 nkuzi ego maka oge akwụmụgwọ
Ọrụ Ego Ndị Ọrụ Na-arụ Ọrụ Dịịrị Ndị Ọrụ Nlekọta Ọrụ 10 na Ndị Ọrụ Ọrụ na Nchekwa na Nchekwa (AGR) dị ka akọwapụtara n'okpuru. Ego a dị maka nwa akwụkwọ mmụta ọ bụla tozuru etozu ma ọ bụ nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ.
Mmemme ndị agha - $ 100 maka ịkwụ ụgwọ nkuzi kwa elekere / $ 2 (ego $ 10) kwa elekere elekere
A na-enweta ego ego ndị Veteran nwere maka ndị nwere nkwanye ugwu na-asọpụrụ nke na-erughị eru maka ngalaba Ngalaba Veterans Affairs ma ọ bụ Ngalaba Nchebe Nchebe. Ego a dị maka ụmụ akwụkwọ ọ bụla ruru eru na-achọ ogo mmụta dị elu ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ.
Mmemme CareerSource - $ 100 nkuzi ego kwa awa akwụmụgwọ
Ego CareerSource dị maka ụmụ akwụkwọ ndị debanyere aha na nnọkọ dị ugbu a ma na-enweta enyemaka ego site na CareerSource maka mmefu agụmakwụkwọ ha.
Onye were n'ọrụ / Mmemme Alliance Programme - $ 100 nkuzi ego kwa awa akwụmụgwọ
Ego dị n'aka ndị ọrụ / Corporate Alliance maka ụmụ akwụkwọ ndị debanyere aha na nnọkọ dị ugbu a ma otu n'ime ndị ọrụ Hodges University's Employer / Corporate alli na-arụ ọrụ. Enwere ike ịchọta ndepụta nke njikọ aka dị ugbu a n'okpuru.
Gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Hodges (HUGS) - $ 100 ịkwụ ụgwọ nkuzi kwa ụbọchị
Ego HU gụsịrị akwụkwọ dị maka ụmụ akwụkwọ ndị debanyere aha na nnọkọ dị ugbu a wee mezue nzere bachelọ na Mahadum Hodges ma ugbu a na-emecha Degree Master Master na Mahadum Hodges.
Biko rụtụ aka na Akwụkwọ ntuziaka ụmụ akwụkwọ iji nyochaa nkọwa gbasara usoro mmemme ego mmụta ọ bụla na ntozu chọrọ.
Mwepu ego nke Corporate Alliance
BOWR Hosp Hospice
Insurance Brown & Brown
Ọfịs Charlotte County Sheriff
Obodo Ft. Ngalaba Ndị uwe ojii Myers
Obodo nke Marco Island
Collier County Gọọmentị
Lierlọ Akwụkwọ Ọha na eze nke Collier County
Lierlọ Ọrụ Sheriff nke Collier County
Ebe David Lawrence
Glenview na Pelican Bay
Nzọpụta Ọkụ Goldenzọ Goldenmá Golden
Endlọ Akwụkwọ endlọ Akwụkwọ Hendry County
Olileanya na Ọrụ Ahụike
Lee County Board nke County Commissioners
Countylọ Akwụkwọ Ọchịchị Lee County
Lee Ahụike Ncheta Lee
Phystù Ndi Ogwu Millennium
Otu Naples Medical Group
NCH ​​usoro nlekọta ahụike
Isi Nlekọta Ahụike nke SWFL
Ndị dọkịta na-agwọ ọrịa mpaghara
Nwere mmasị na Corporate Alliance? Kpọtụrụ onye na-ahụ maka ịba mba na mbanye mmekọrịta, Angie Manley, CFRE na 239-938-7728 ma ọ bụ email amanley2@hodges.edu.
Mmemme Ọmụmụ Ihe
Mụtakwuo Banyere Mmemme Nkuzi Mmụta Anyị
Nchịkọta Ozi Ọzụzụ Nkụzi nke Hodges
A ga-enye onyinye mmụta na-adabere na njirisi esetịpụrụ maka onyinye mmụta mmụta ọ bụla n'okpuru mahadum na / ma ọ bụ nkọwa onyinye.
Mgbe Kọmitii Scholarship natara, votu ma kwado agụmakwụkwọ niile maka oge ọ bụla, a ga-edenye aha ndị nnata na Office of Student Financial Services maka ebumnuche ịkwụ ụgwọ.
Inye ihe nchoputa nke ugwo gha adiri ha nma dika ihe omumu ihe omumu na akwukwo (GPA), aha ndebanye aha (oge ugwo kwa oge), mkpa ego / onyinye ezubere ezinulo (EFC), na edemede / nyocha (ma oburu na achọrọ).
Criteria ruru eru maka agụmakwụkwọ niile
Otu nwa akwukwo di elu - ma obu onye gụsịrị akwukwo na nguzo di nma na oge ha nwere ma obu opekata mpe GPA agwakọta nke 2.0 maka ulo akwukwo na 3.0 GPA maka umu akwukwo gụsịrị akwukwo wepu ego na ego ha.
All scholarships n'okpuru nwere ike ịchọ nhazi ndị ọzọ ka nwa akwụkwọ wee tozuo maka agụmakwụkwọ.
Studentsmụ akwụkwọ ndị na-anata ego na / ma ọ bụ nkuzi maka agụmakwụkwọ dị ka akụkụ nke nkwekọrịta mahadum ndị ọzọ ma ọ bụ amụma agaghị enwe ike ịnata agụmakwụkwọ ụlọ ọrụ dịka a na-ekekwa ụdị ego a dịka enyemaka ụlọ ọrụ.
Ngwa niile na akwụkwọ ozi edepụtara bụrụ ihe onwunwe nke Mahadum Hodges ma agaghị eweghachite ya.
A ga-ewepụ akwụkwọ agụmakwụkwọ ọ bụla achọpụtara nwere ozi ụgha ma ọ bụ na-eduhie eduhie site na ntụle ọzọ site na Kọmitii Ọzụzụ.
Edemede, ọ bụrụ na achọrọ, a ga-ekpe ikpe na ọnụọgụ nke ga-agụnye ụdị / ọdịnaya yana ederede ederede doro anya, kwupụta nke ọma, wee hazie ya, ma gosipụta nghọta dị oke mkpa nke isi ihe ọmụma na mmụọ na-emetụta isiokwu (s) ).
Isi ego nke Florida Independent College
Dịka onye otu kọleji Independent na Mahadum nke Florida (ICUF), Mahadum Hodges nwere ohere itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ nke Florida Independent College Fund (FICF) nyere. FICF bụ ntọala na-enweghị uru maka mmemme na mmepe akụ maka kọleji ndị ọzọ na mahadum nke Florida (ICUF). Ọ na - enweta ego n’aka ndị nyere onwe ha, ụlọ ọrụ, na azụmaahịa, yana steeti Florida. FICF scholarships nwere ụdị na njirisi a ga-atụle. Kọmitii Ọzụzụ Mahadum Hodges na-enyocha akwụkwọ ụmụ akwụkwọ maka enyemaka ego nke HU yana otu ụmụ akwụkwọ zuru oke iji chọta nhọpụta kwesịrị ekwesị maka onyinye FICF.
Ọ bụrụ na enyere nwa akwụkwọ akwụkwọ FICF na ego gafere ọnụọgụ ego nzuzo nke onwe ya nke egosipụtara na ntuziaka nke abụọ, mgbe ahụ enwere ike ghara ịlele nwa akwụkwọ ahụ tozuru oke maka enyemaka ọzọ site na Kọmitii Ọzụzụ Mahadum Hodges.
Ọdịdị, ngosi, na izu ezu nke akwụkwọ anamachọihe a ga-eleba anya na inye onyinye mmụta. Agaghị atụle ngwa ngwa ezughi ezu. Ngwa niile na akwụkwọ ozi edepụtara bụrụ ihe onwunwe nke Mahadum Hodges ma agaghị eweghachite ya.
Edemede, ọ bụrụ na achọrọ ya, a ga-ekpebi ya n'ụdị yana ọdịnaya yana ederede nke doro anya, kwupụta, nke a haziri nke ọma, ma gosipụta nghọta pụtara ìhè nke okwu amamihe na nke mmụọ metụtara isiokwu e kenyere.
Kọmitii Ọzụzụ Mahadum Hodges nwere ike ịjụ ndị na-achọ akwụkwọ dị ka akụkụ nke usoro ahụ ma ọ bụrụ na achọrọ ozi ndị ọzọ maka usoro mkpebi.
N'inye onyinye mmụta, Kọmitii Scholarship nke Mahadum Hodges na-ekpe ndị na-enyocha akwụkwọ dabere na (1) arụmọrụ agụmakwụkwọ, (2) akwụkwọ nyocha nke onye ahụ, ma ọ bụrụ na achọrọ, (3) ajụjụ ọnụ onwe onye, ​​ọ bụrụ na achọrọ, (4) mkpa ego, na (5) ) ngwa zuru ezu.
A na-ahụta agụmakwụkwọ sitere na FLORIDA INDEPENDENT COLLEGE FUND (FICF) dị ka agụmakwụkwọ ndị ọzọ nke Mahadum Hodges. A na - ahọpụta ụmụ akwụkwọ maka onyinye FICF site na Kọmitii Ọzụzụ Mahadum Hodges. Onyinye onyinye nke FICF guzobere nwere ike ịdị iche.
Nnukwu nkuzi ego Hawks
The Scholarship nke Hawks (nke a makwaara dị ka ego agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ) gụnyere onyinye zuru oke sitere na ndị na-enye onyinye na-enyekarị mahadum. Ego a nwere akwukwo ndi a aha ha:
Ego mmụta ego nke Gaynor Hawks
Nkuzi ego nke CenturyLink Hawks
Pettit Hawks Ego nkuzi
Isiokwu niile nkọwa, dị ka e kwuru n'elu, banyere “Nke ruru eru maka agụmakwụkwọ niile. ”
Studentsmụ akwụkwọ na-achọ ogo mmụta na-ejedebe na ego ndị a n'otu oge:
Debanyere aha na 1-8 kaadị akwụmụgwọ: ihe ruru $ 500
Debanyere aha na 9-11 kaadị akwụmụgwọ: ihe ruru $ 1000
Debanyere aha na 12 ma ọ bụ karịa oge akwụmụgwọ: ihe ruru $ 1500
Studentsmụ akwụkwọ chọrọ gụsịrị akwụkwọ na-ejedebe na ego ndị a n'otu oge:
Debanyere aha na 1-5 kaadị akwụmụgwọ: ihe ruru $ 500
Debanyere aha na 6-8 kaadị akwụmụgwọ: ihe ruru $ 1000
Debanyere aha na 9 ma ọ bụ karịa oge akwụmụgwọ: ihe ruru $ 1500
Anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụmụ akwụkwọ na-etinye akwụkwọ na Hawks Fund Sikolas kwa ọnwa, n'ihi na ọnwa-amalite; Otú ọ dị, Kọmitii Scholarship maara banyere ego ugbu a ma nwee ike ịkwụsị ego a ga-akwụ kwa ọnwa.
Enyemaka nke Scholarship maka Ego Maka Ndị Agha Veterans (SAVE)
Isiokwu niile nkọwa dị ka e kwuru n'elu banyere “Criteria ruru eru maka agụmakwụkwọ niile”; na
Ga-abụrịrị onye na-eme agadi ma ọ bụ onye ọlụlụ / onye dabere na onye nwere nkwarụ ma ọ bụ onye nwụrụ anwụ nke na-achụ onye na-agụghị akwụkwọ ma ọ bụ gụsịrị akwụkwọ.
N'ime afọ ndị gara aga, emere ego a ruo oge ọkọchị iji gosipụta ego maka egwuregwu gọọmentị etinyere maka uru VA Yellow Ribbon; agbanyeghị, ndị lagoro ezumike nke chọrọ VA Yellow Ribbon ego na afọ gara aga belatara nke pụtara na anyị nwere ike ịmalite ịnyefe ego SAVE na-aga n'ihu.
Jerry F. Nichols Scholarship Akaụntụ
Isiokwu niile nkọwa dị ka e kwuru n'elu banyere “Criteria ruru eru maka agụmakwụkwọ niile";
Usoro ihe omumu nke ulo akwukwo agha aghaghi ibu na Akaụntụ;
Ọnọdụ ndebanye oge (12 ma ọ bụ karịa nzere maka UG; 9 ma ọ bụ karịa kredit maka GR); na
Dịkarịa ala, 3.0 GPA maka ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ.
Enwere ike inye ụmụ akwụkwọ ruru $ 1500 kwa oge.
Enwe ego na-ejedebe nke ukwuu ebe enwerekwa njirisi akọwapụtara nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-aza ajụjụ-ndị isi ụmụ akwụkwọ anaghị achịkwa ugbu a.
Jerry F. Nichols Veterans Accounting Nkuzi
Ndị isi ndị agha / ndị agha họọrọ, mana enwere ike inye ha nwa akwụkwọ na-enweghị ọnọdụ ndị agha / nke ochie ma ọ bụrụ na nwa akwụkwọ anaghị eche na ha tozuru oke;
Enwe ego na-ejedebe nke ukwuu ebe enwerekwa njirisi akọwapụtara nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-aza ajụjụ-ndị isi ụmụ akwụkwọ gbakwunyere ọkwa nke ndị agha anaghị arụ ọrụ ugbu a.
Naples North Rotary Ọzụzụ
Nwa akwukwo gụsịrị akwukwo na Collier County Schools ma obu biri na Collier County;
Gaa na opekata mpe na otu (1) Naples North Rotary nzukọ, nke achikọtara site na Mahadum Hodges (Onye isi Mahadum Ọganihu) na onye otu klọb; na
Soro na oru 1 (XNUMX) Naples North Rotary na oru ngo n'ime afọ enwetara ego.
Nkọwa nke agụmakwụkwọ dị ka nke enyere site na onye nyere onyinye na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị Kọmitii Ọzụzụ na-ahụ maka agụmakwụkwọ a. N'ụzọ dị mwute, ụmụ akwụkwọ na-eche na ha agaghị enwe ike ịga nzukọ akọwapụtara na / ma ọ bụ isonye na ọrụ (s) ọrụ n'ihi ndụ onwe ha na usoro ọrụ ha.
Meftah Foundation Foundation maka ndị nne na-alụbeghị di
Ga-abụ nne naanị ya na-azụ ụmụ nwere obere ụmụaka bi n'ụlọ;
Debanye aha na ulo akwukwo ma ọ bụ usoro agụmakwụkwọ n'ịntanetị; na
Ursgbaso akara kọleji ka iwelie ohere ọrụ ha na ego ezinụlọ ha.
Enwere ike inye onye (1) onyinye $ 2500, kwa afọ, n'oge Fall.
Enwere ego dị ukwuu; dị mwute ikwu na, n'ihi ụkpụrụ sitere n'aka onye nyere onyinye, $ 2500 nke ego nwere naanị otu onye (1) nnata bụ ego kachasị enwere ike ịnye kwa afọ.
Akwụkwọ nkuzi Foundation nke Moorings Park na nọọsụ
Nwa akwukwo na acho nzere bachelọ na ulo akwukwo; na
A ga-enye ndị nnata bi na Collier County ihe mbụ, mana achọrọ.
Mụ akwụkwọ nwere oke ego ndị a n'otu oge:
Ọmụmụ ihe a dabere na nkọwa nke mmemme nke nwere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na mmemme ahụ ebe enwere ego ole a na-enweta kwa afọ.
Akara nkuzi Foundation nke Moorings Park na Clinical Mental Health
Nwa akwukwo na acho nzere Master's na Clinical Mental Health Counseling; na
Peter & Stella Thomas Ndị Ọkachamara Ọkachamara
Onye agha ochie nke a napụrụ n'ụzọ nkwanye ugwu;
Edemede na-ekwu banyere ndekọ ọrụ agha onwe onye gụnyere gụsịrị akwụkwọ na ebumnuche ya na atụmatụ ya;
Ọnọdụ ndebanye oge (12 ma ọ bụ karịa nzere maka UG; 9 ma ọ bụ karịa kredit maka GR);
Onye bi na Collier, Lee ma ọ bụ Charlotte County; na
Dịkarịa ala, 2.5 GPA maka ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ.
Onu ego akwukwo a ga - ahazi ugwo nke ulo akwukwo (1) kwa oge.
Ọmụmụ ihe ejedebe na iri na abụọ (12), kwa afọ.
Nkọwapụta nke mmụta mmụta mmụta na-eweta ọnụọgụ ole na ole nke ngwa, ọkachasị gbasara akụkụ edemede. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ anaghị enwe mmasị ịde / edemede edemede, ndị ọrụ Office of Student Financial Services 'Veterans Services team amalitela inwe mkparịta ụka na ụmụ akwụkwọ ochie banyere ịde edemede na inyere ha aka na usoro ahụ.
Ọnụ ọgụgụ kachasị elu kwa afọ nke ịkụziri ego na-ewetakwa nchegbu; ọ bụrụ na Kọmitii Scholarship nwere ike inye ụmụ akwụkwọ 12 onyinye, ihe kachasị eji mee ihe ga-abụ $ 27,000 kwa afọ.
John & Joanne Fisher Ndị Ọzụzụ Ndị Ochie
Onye agha ochie ma ọ bụ nwunye nke onye agha ochie nke a napụrụ n'ụzọ nkwanye ùgwù;
Edemede na-ekwu banyere ndekọ ọrụ agha onwe onye ma ọ bụ echiche di na nwunye nke mmetụta ya gụnyere gụnyere gụsịrị akwụkwọ na ebumnuche na atụmatụ ya;
Nkuzi mmuta ji onyinye iri na abuo (12), kwa afo.
Ọ bụrụ na ndị okenye lagoro ezumike nka ma ọ bụ di na nwunye nke ndị agha lagoro adịghị, enwere ike inye ụmụ akwụkwọ Fisher School of Technology (FSOT) ego agụmakwụkwọ.
Earl & Thelma Hodges Ọzụzụ
Ederede na-ekwu ihe ịma aka onwe onye tupu ị debanye aha na Mahadum Hodges ma tinyekwara ihe mgbaru ọsọ na atụmatụ gụsịrị akwụkwọ.
Onye bi na Collier, Lee, Charlotte, Glade ma ọ bụ Hendry County; na
Nka akwukwo nwere ugwo abuo (2) kwa afo, nke putara ihe banyere odida na udu mmiri.
Nkọwapụta nke mmụta mmụta mmụta na-eweta ọnụọgụ ole na ole, ọkachasị maka akụkụ edemede. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ anaghị enwe mmasị ide / ịmepụta edemede, Office of Student Financial Services na-arụ ọrụ nke ọma na Office nke Mmụta Mmụta iji kọwaa usoro edemede na otu esi ede edemede dị mma.
Ọnụ ọgụgụ kachasị elu kwa afọ nke ịkụziri ego na-ewetakwa nchegbu; ọ bụrụ na Kọmitii Scholarship nwere ike inye ụmụ akwụkwọ 2 onyinye, ihe kachasị eji mee ihe ga-abụ $ 4,500 kwa afọ.
Earl & Thelma Hodges Ndị Ọkachamara Ndị Ochie
Edemede na-ekwu banyere ndekọ ọrụ agha onwe onye gụnyere gụsịrị akwụkwọ na ebumnuche ya na atụmatụ ya; na
Onodu ntinye aha oge pere mpe (opekata mpe 6 ma ọ bụ karịa kredit kwa oge).
Jeanette Brock LPN nkuzi
Usoro ihe omume ogo ga-adị na Nursing Practical Nursing (LPN);
Ma ọ dịkarịa ala opekata mpe ngụkọta ọkwa (GPA) nke 2.0.
Kọmitii na-ahụ maka mmụta mmụta maara nke ọma banyere etu ego si dị ugbu a ma na-ejedebe ego ole a ga-akwụ kwa ọnwa.
Kedu ka m ga - esi tinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ ụlọ ọrụ?
Oge opupu ihe ubi bụ sistemụ kọmputa anyị ebe ụmụ akwụkwọ nwere ike nbanye (ntinye aka) ma mejupụta ngwa maka agụmakwụkwọ ọ bụla. Tupu itinye akwụkwọ, ụmụ akwụkwọ nwere ike ịhụ ozi zuru ezu gbasara nke ọ bụla n'ime agụmakwụkwọ anyị yana njirisi dị mkpa iji nweta ego achọrọ. Ọ bụ nnukwu ngwa ọrụ na-enye ụmụ akwụkwọ ohere itinye akwụkwọ maka otu agụmakwụkwọ ma ọ bụ ọtụtụ n’otu oge. Ugbu a, anyị na - arụ ọrụ iji bulie usoro mmiri mmiri anyị maka ụmụ akwụkwọ nwere ike ịhụ nkọwa ndị ọzọ gbasara agụmakwụkwọ, njirisi chọrọ, oge imechi maka agụmakwụkwọ ọ bụla, yana mgbe ị ga - etinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ ọ bụla - mmelite ndị a ga - abịa maka oge Jenụwarị 2019 na gafere.
Tinye maka agụmakwụkwọ Sikolashị
Nkwupụta Nkwado Nkuzi
Ebumnuche nke mmemme agụmakwụkwọ Mahadum Hodges bụ ịgbakwunye akụ nke ụmụ akwụkwọ ruo oke ike kwere ha iji bido ma ọ bụ gaa n'ihu ọmụmụ mahadum. Studentsmụ akwụkwọ niile ruru eru itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ. Biko cheta na ọ bụrụ na nwa akwụkwọ anatala akwụkwọ ezumike ego na / ma ọ bụ akwụkwọ nkuzi dị ka akụkụ nke nkwekọrịta ma ọ bụ amụma ndị ọzọ na mahadum, a na-ekekọta ụdị ego a dị ka enyemaka ụlọ ọrụ na ụmụ akwụkwọ ahụ agaghị enwe ike ịnata ma ego nkuzi / waivers na agụmakwụkwọ ụlọ ọrụ.
Ihe ndi mmadu choro ka ha ruru eru inweta akwukwo ulo akwukwo gunyere, mana ha adighi oke: Studentsmụ akwụkwọ ga-abụ ndị gụsịrị akwụkwọ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na ezigbo nguzo ha na nke ugbu a ma ọ dịkarịa ala opekata mpe ngụkọta ọkwa (GPA) nke 2.0 maka ụmụ akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ na 3.0 GPA maka ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ. Onu ogugu akwukwo nke onye obula nwere ike inwe ihe omuma ndi ozo na iru eru nke achoputara n'okpuru.